Taageerada email kksunshine@ssbelt.com
Maxaa App 0086-18668867296
C Nooca Conveyor Belt
V Nooca Conveyor Belt
Dabka caabida Conveyor Belt
Dhammaadka lahayn Conveyor Belt
Oil caabida Conveyor Belt
Rubber v suunka
EDGE cayriin suunka V
ilkaha motocyle v suunka
ilkaha caadiga ah v suunka
Duudduubay V suunka
motocyle v suunka
suunka v caadiga ah
dhaqidda mashiinka v suunka
Black Gudbinta Belt
Green Belt Gudbinta
Yellow Gudbinta Belt
Brown Gudbinta Belt
Orange Gudbinta Belt
Red Gudbinta Belt
Waqtiga Auto Belt
Godgodan V Belt
Kartuunka Auto Mat
Saafi ah hemp Auto Mat
Biyuhu Auto Mat
waxaan ka qeyb galay caag Dubai & bandhig caag ah
Sannadkii 2012, waxaan ka qeyb galay caag & caag bandhig Dubai ee lix maalmood. Inta lagu jiro mudadaas, waxa aan la hadalnay macaamiisha badan oo gaboobay oo helay in ay ogaadaan macaamiisha badan oo cusub.
waxaan ka qeyb galay bandhig warshadda macdan qodista Ruushka
In 2015, waxaan ka qeyb galay bandhig Ruush warshadaha macdanta, kaas oo socday muddo 5 maalmood ah. Inta lagu jiro mudadaas, waxa aan metmany macaamiisha cusub iyo diyaarinta dhigay suuqa Ruush furitaanka.
waxaan ka qeyb galay Hanover bandhig warshadaha ee Germany
In 2016, waxaan ka qeyb galay bandhig warshadaha ee Hanover ee Germany muddo 5 maalmood ah. Muddadan, waxaan helay in ay ogaadaan macaamiisha badan oo cusub oo ka dhigtay diyaar garowga suuqa Yurub furan.
Ningbo Sunshine Rubber Oo caaga Tech Co., Ltd.
waxaan ka qeyb galay caag Dubai & plast ...
waxaan ka qeyb galay ee Ruush warshadaha macdanta e ...
waxaan ka qeyb galay Hanover exhibi warshadaha ...